PressReader - Ilanga: 2018-07-12 - Iyinkanankana eyokuqasha imenenja kamasipala
Iyinkanankana eyokuqasha imenenja kamasipala
Usuzofika unqamlajuqu engekho oqokiwe eMuziwabantu
Ilanga - 2018-07-12 - Izindaba - NONHLAKANIPHO SHINGA nonhlakaniphos@ilanganews.co.za
KUKHALWA ngokungabikhona kozinzo kuMasipala uMuziwabantu, eHarding njengoba kuthiwa namanje kusenzima ukuba umkhandlu wakhona uhlale, uvumelane ngosuku okumele kwenziwe ngalo inhlolokhono yokuqala yokuqasha imenenja kamasipala.
Kuzokhumbuleka ukuthi ILANGA like labika ngezigemegeme ezahlukene ebezenzeka kulo masipala njengoba uke wahlala eside isikhathi ungenayo imenenja ngoba ebikhona iphelelwe yinkontileka.
Lo mapasila uke wabhekana nenkinga sekumele uholele izisebenzi ngoNhlolanja (February), engekho umuntu ozosayina kwazise ubungenayo imenenja ne-chief financial officer (CFO).
Bekusolwa imeya, uNkk Dixie Nciki nobuholi obuthile bukamasipala ngokungasebenzi ngokubambisana ekubeni kuqashwe ngoba bona befuna kungaqashwa enye imenenja ngaphandle kukaMnu Sazi Mbhele - obevele eqhoqhobele lesi sikhundla.
Ngokuthola kweLANGA, yize isikhona imenenja ebambile, uMnu Velaphi Kubheka, kodwa kusafana nokuthi kayikho imenenja ngoba kunezinqumo angakwazi ukuzithatha.
Imithombo engaphakathi kulo masipala, ithi amaqembu aphikisayo akhuluma aze ome amathe uma kuhleli umkhandlu, ezama ukuthola ukuthi kungani namanje kungakaqashwa njengoba sekuyinyanga yesihlanu lena lo masipala ungenayo imenenja eqashwe ngokugcwele.
“Uzinzo kalukho nhlobo kulo masipala, lokhu kudalwa kakhulu wuqhekeko olukubantu be-ANC, okuyiyona ephethe njengoba aba- nye babo besafuna kubuyele uMnu Mbhele kanti abanye bafuna kuqashwe omunye umuntu.
“Ukungaboni ngasolinye kwabo yikhona-ke okwenza umkhandlu ungakwazi ukuvumelana ngosuku lokwenza inhlolokhono yokugcina ukuze kuqashwe.
“UMnyango wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu KwaZuluNatal, ububanike isikhathi esingangezinyanga eziwu-6 ukuba baqashe ngale kwalokho, bazobe sebephule umthetho,” kusho omunye umthombo weLANGA.
Uthi amaqembu aphikisayo ase- qalile ukushaywa wuvalo njengoba uNcwaba (August) ususondele kodwa kalukaphumi usuku lwenhlolokhono yokuqasha imenenja.
Kuzokhumbuleka ukuthi kuze kubanjiswa uMnu Kubheka nje, yingoba besekungenelele uNgqongqoshe wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu KwaZulu-Natal, uNkk Nomusa Dube-Ncube ngoba umasipala ulokhu ubamba uyeka.
Ngokuthola kwaleli phephandaba, kubantu abafake izicelo zalo msebenzi, igama likaMnu Mbhele nelikaMnu Kubheka womabili akhona. Imithombo iphinde iveze ukuthi nasekuqasheni i-CFO, kunesiphithiphithi nakhona - njengoba kukhona obambile.
Okhulumela uMnyango wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu KwaZulu-Natal, uMnu Msawakhe Mayisela, uthe njengomnyango bazimisele ngokunikeza umkhandlu isikhathi esanele sokuqasha.
“Isimo sakhona (kumasipala) sisibhekile futhi sizimisele ngokuba kube khona uzinzo. Okwamanje sibanika ithuba lokuba baqashe ukuze umsebenzi wenzeke ngendlela,” kusho yena.
Usomlomo kulo masipala, uMnu Mzwandile Nyathi, uthe njengomkhandlu banesifiso sokuba le nyanga iphele sebeqashile kulezi zikhundla.
“Lokhu kokuthi kakuqashiwe ngoba kunomdonsiswano, kangikwazi. Engikwaziyo wukuthi kube nezingqinamba zokuqashwa kwephaneli engamgculisanga ungqongqoshe kwase kudingeka ukuba siqale phansi siqoke entsha.
“Njengamanje sebezikhiphile izinsuku okuzokwenziwa ngazo inhlolokhono, kokuzoba ngesonto elizayo uma konke kuhambe kahle,” kusho uMnu Nyathi.
Imizamo yokuthola uNkk Nciki iphunzile njengoba ucingo lwakhe belungangeni. Leli phephandaba lizamile nangesonto eledlule kodwa laze lashiya umyalezo kunogada wakhe kodwa lutho ukubuyela kulona.
ATHINI AMAQEMBU APHIKISAYO?
UMNU Thabani Mbatha weDA, uthe lokhu (ukungaqashwa kwemenenja) kubakhathaza kakhulu njengeqembu eliphikisayo ngoba kuphazamisa kakhulu ukuya kwentuthuko emphakathini.
“Thina kasinandaba nokuthi baqasha bani kodwa okubalulekile wukuba kuqashwe ngoba kuliqiniso ukuthi siyasishaya isikhathi manje.
“Imenenja kamasipala iyinjini yawo, ngakho-ke kumele umkhandlu ulusukumele lolu daba, ngokunjalo nasehhovisini le-CFO kuyadingeka ukuba kuqashwe,” kusho uMnu Mbatha.
UMnu Melly Cele we-EFF, uthe inkinga enkulu edala kungayeki phambili ngokuqashwa kwemenenja ne-CFO, yingoba i-ANC ebusayo kulo masipala ihlukene phakathi.
“Abanye bafuna kubuye uMnu Mbhele lona obeyimenenja phambilini kanti abanye kabafuni kube nguMnu Kubheka, okuyikhona okwenza kube nezinkinga.
“Okuphinde kusinike izingqinamba wukuthi laba abahola umkhandlu yibona abaphethe amandla, bafuna ukuwasebenzisa ngendlela okungeyona kanti nakho lokhu kubambezela bakwenza ngamabomu,” kusho uMnu Cele.
IMEYA yaseMuziwabantu, uNkk Dixie Nciki, umasipala wayo okubikwa ukuthi siyawuphelela isikhathi esibekiwe ukuba uqashe imenenja.